Wisata Singapura TempatwisataBizID - LamaUtama - Priokville46
Boat louay lisebenza njengenye yeendawo ezininzi athandwa kakhulu isiselo lamanzi okanye imvubu e Singapore, kunye kuluhlu yayo ngeentlobo imivalo ezimibalabala akuyo kunye zokutyela alfresco. Le ndawo compact into engena phakathi Clarke louay emantla kunye Marina Bay emzantsi (zombini walkable). Xa ninikela omnye amabala sundowner owuthandayo kwisixeko namhlanje, kwini odumileyo uba ubutyebi bembali, into eqingqwe nzulu iziseko okwilizwe; Enyanisweni Boat louay yaba yinxalenye uyezibuko ephithizela Singapore, ekulawuleni zokubonelelwa kwempahla kowandomelezayo Singapore abe luhlanga kuphuhliswa. The main Boat louay bhuma iqulathe indlela pedestrianized ukuba iziporo ngendlela yayo ijikeleza kwigophe le-Singapore River, baphalaza phandle Marina Bay waza ekugqibeleni Singapore kwiStraits. Uninzi imivalo kunye zokutyela apha zicwangciswa izindlu angumqondiso endala multi-obugolide, kunye leyini eqala e-Elgin Bridge kunye nesiphelo kufuphi Fullerton Hotel. Njengoko ngokunjalo ukudla nokusela, Boat louay na ibala umfoti yokwenene kaThixo. Izindlu bebala ukuphuma ubuntu, ngoxa ukukhanya ebusuku kulo amanzi ngokulinganayo nje umxhelo.